Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ German Mesut Ozil Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Biography
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Zidane German'. Anyị Mesut Ozil Nwa akụkọ Akụkọ na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo ụbọchị. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu.
Ee, onye ọ bụla maara gbasara ihe ndekọ aka Ozil nke ọhụụ ma kpọọ egwu ma ọ bụ mmadụ ole na ole na-atụle ndụ ya n'èzí pitch bụ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka ịmalite.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Ndụ mbido
Mesut Özil a mụrụ na October 15, 1988, na Gelsenkirchen, Germany na Mustafa Özil (nna) na Gulizar Özil (nne). A mụrụ ya nwa ikpeazụ n'ime ụmụ anọ. Karịsịa, a mụrụ ya dị ka onye Alakụba nke sitere na Turkish. N'ikwu ya, ọ bụ Muslim Turk Turk nke nne na nna na-akwaga. Ezigbo nne na nna Mesut gara site n'ala na oké osimiri site na Turkey gaa Germany iji nweta ebe obibi dị mma na ebe obibi ọkụ dị na Germany nke Ruhr.
Mesut Ozil malitere na ndụ ya dị ka nwatakịrị si n'ezinụlọ dara ogbenye. A mụrụ ya n'oge oge ụlọ ọrụ Germany na-ebelata ebe enweghị ọrụ maka ndị na-akwaga mba karịrị 70%. N'ihi ya, ndị mụrụ ya si n'aka otu onye na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ na-eme ka ndị ọzọ na-agagharị. Ugbo ala ya nke ozo bu ihe omuma ndi mmadu na otutu ulo mkpofu nke bu ihe negosi ogbenye.
N'agbanyeghị ihe ịma aka ndị a, Mesut kpebisiri ike ịga nke ọma. Ihe niile o tinyere aka ya mere nke ọma .. Malite site na agụmakwụkwọ ya gaa n'ọchịchọ ya ka ọ malite ịkụ bọl. N'ezie, Mesut ji football dịka ụzọ mgbapụ si ịda ogbenye.
Ịhụnanya ya maka football malitere mgbe ọ malitere igwu egwu ya n'ámá egwuregwu kachasị amasị ya nso ụlọ ya. Mesut Ozil mgbe ọ dị obere ghọrọ nnọọ ihe ijuanya na ịgba bọl. Mgbe a nwara ya, ọ ga-eburu ya laa ma dinara ya n'elu ihe ndina ya. O jikwa oge dị ukwuu na-ele nwanne ya nwoke nke okenye ka ọ na-agba ya ụta.
N'ịbụ onye tolitere, ọ naara ọtụtụ ndị na-ahụ maka ntụrụndụ site n'aka nwanne ya nwoke bụ okenye bụ Mutlu, bụ ndị na-ahụkarị egwuregwu maka ntụrụndụ nke ịkpọ ya. Mutlu ekwenyeghi na onye ozo na-aga ebe o nwere ike ime ya n'egwuregwu. O doro anya, ebe a na-ahụkarị ndị na-agba ọsọ na ndị na-agba ọsọ ụgbọ mmiri, ndị na-esite na 16,000, bụ Mesut Ozil.
Nzube ya maka ịga nke ọma emeela ka akụkọ ọma nke meworo ka mba Germany nwee ọganihu. A na-ele ya anya dịka onye mbụ ọkpụkpọ mba si mba ọzọ si mee ka ọ bụrụ mba ụwa.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Malite na bọl
Mesut Ozil kpebiri inye égbè bọl ozugbo ọ chọpụtara na ọ bụ ụzọ doro anya isi pụọ na ịda ogbenye. Ọ malitere site na ịga na football ụlọ akwụkwọ ya na-esote site n'ịzụlite nkà egwuregwu bọl ya na ndị enyi ya na "Agụmakwụkwọ Ọnụ," (ogige dị n'ógbè ahụ gbara ya gburugburu) nke dị na agbata obi ya.
Ọ bụ 'oghere enwere' na mbụ ọkpụkpụ nke Oza na-agafe. Nke a mere na district German Bismarck nke Gelsenkirchen. Mesut Ozil ga-anọ n'ebe ahụ 'kwa ụbọchị ma ọ bụ anyanwụ, snow ma ọ bụ mmiri ozuzo', dị ka nwanne ya nwoke tọrọ ya bụ Mutlu si kwuo.
Ahụmahụ nwetara site "Agụụ Egwuregwu" eme ka o nwekwuo ohere inweta ule na-aga nke ọma maka nnukwu ìgwè n'èzí agbata obi ya. Nke mbụ, o debara aha ya n'ụlọ akwụkwọ elementrị nke ụlọ akwụkwọ ya.
Mesut enweela ọganihu site na nwata ruo onye toro eto nke na-akọwa ọkwa ọkwa kọleji. Ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya kachasị ukwuu na Germany na ụmụ akwụkwọ 1,400. A kwadoro ya nke ukwuu ma ka ahọrọ ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ ahụ.
Joachen Herrmann, onye osote isi na ụlọ akwụkwọ sekọndrị Ozil, kọwapụtara nwa okoro ahụ na-akpali mmasị na football dị ka 'ntakịrị autistic', na-agbakwụnye: 'Ọ na-adị m mgbe ọ na-akpọrọ m bọl.'
Site na windo nke klas ya, Ozil nwere ike ịhụ Veltins-Arena, ụlọ egwuregwu Schalke. Onye na-eto eto na-arọ nrọ nwere ihe nile mere o ji mee ka uche ya kpafuo. N'ihe gbasara talent ya, ụlọ akwụkwọ ahụ nwere njikọ chiri anya na akụkụ Bundesliga.
Ọ bụ Ozil ka ụmụ akwụkwọ ahụ na-agba bọl. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi n'ụlọ akwụkwọ. Manuel Neuer, onye na-elekọta mgbakọ na Bayern Munich nọkwa n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ọ bụ afọ ole na ole karịa Ozil, ebe Julian Draxler dị ala. Benedikt Howedes na Joel Matip bụkwa ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Ụlọ akwụkwọ ahụ na-aga n'ihu n'usoro okwu football. Ha nwere ọtụtụ ihe omume ọzụzụ, ezumike atọ n'ụtụtụ, atọ na mgbede na ugboro ise n'oge ngwụsị izu.
A maara Ozil dịka nwa akwụkwọ echepụtara ma na ọzụzụ na n'oge egwuregwu ya gbanwere àgwà ya. 'Mgbe m hụrụ Mesut maka oge mbụ, aghaghị m ịlele oge ọ dị,' ka Krabbe, onye nkụzi ụlọ akwụkwọ kwuru. 'ọ dị obere, dị jụụ, wepụ ya na pitch. Ma na football football ọ bụ extrovert, onye kasị ukwuu egwu. Ọ na-afụ ya n'obi maka mmetụta. "Ọ bụ ya kachasị mma n'òtù anyị.".
Ọ bụ na Gelsenkirchen College na Ozil ghọtara na ọ ga-aga nke ọma site football. Ọ na-alụ ọgụ ọtụtụ nsogbu ya mgbe ọ malitere ịmalite ịkwanyere ya ùgwù. A maara ya na ọ bụ nwatakịrị na-eme ihere na-elepụ anya.
Onye nkuzi ya tinyere ya "Mesut abụghị onye mmụta nke nwere ike ihu ìgwè mmadụ. Ọ na-emekarị ihere. Ma ọ bụrụ na ị hụrụ ya na pitch ọ bụ onye ọzọ, n'ihi na n'ebe ahụ ọ gbawara. Nye ya bọl, ọ ga-abụkwa onye ọzọ. "
'Ọ bụ obere ihe na-adịghị ike ma ọ nwere ike gbaa 25 mita, na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma banye ọ bụla asọmpi maka bọl,' kwuru, sị onye nkụzi ụlọ akwụkwọ Ralf Maraun. Ọ gara n'ihu ... 'Ọ bụ ezigbo ndị na-eto eto n'okporo ámá. Echetara m mgbe anyị meriri egwuregwu 12 egwuregwu efu. Mesut weere 10. Onye nchịkọta ndị ọzọ na-akpọ m wee sị m, "Oge na-esote, biko hapụ ụmụaka nọ n'ụlọ". '
Na College, nwa nwoke si mba Bismarck ghọrọ onye na-ama ewu ewu. N'oge na-adịghị anya, ọ debara aha na ụlọ ọrụ German maka ụlọ akwụkwọ ebe o nwetara akara ya. Nke a mere ka o nwee ike itinye aka na nnukwu asọmpi.
Mesut na-etinye oge awa ọ bụla iji mee ka ọchịchọ ndụ ya na-arụ ọrụ. Mgbe o mechara, o mere otu ihe onye ọ bụla ka na-echeta ya ruo ụbọchị. Nke ahụ bụ; soro ya na ndi anyi huru n'anya nwee ihe iga nke oma.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Ndụ Ezinụlọ
Ndị ezinụlọ Mesut Ozil malitere ndụ na district nke Bismarck, Germany. Nke a bụ agbata obi na Germany nke ọtụtụ ndị Turkish Migrant na-ebi na ya.
Ezinụlọ ya si na Turkey gaa Germany iji ghọọ ndị ọrụ n'afọ 1967. Kemgbe ọtụtụ afọ, ha dara ogbenye. Ọ bụ Mesut na-eji bọlbụ gbanwere ihe mgbaru ọsọ nke ezinụlọ ya. Ọ bụ naanị Turkish Migrant onye mere ka ezinụlọ ya nwee nnukwu ịrị elu site na ịda ogbenye na akụ na-enweghị atụ.
NME: Mustafa Özil bụ nna Ozil. Ọ bụ ọgbọ nke abụọ Turkish migrant bụ onye kwagara nna ya na German mgbe ọ bụ 6 afọ.
Tupu ọ gbanwee ọrụ mgbe nwa ya nwoke mere ya n'egwuregwu football, ọ bụbu onye ọrụ metal. Ọ malitere dị ka onye ahịa (ngwaahịa ọkụkọ) n'oge ọ bụ nwata.
Mesut Ozil kwere ka nna ya Mustafa bụrụ onye na-elekọta ya mgbe o mere ya na football. Nke a mere ka o chefuo ọrụ ochie ya ma lekwasị anya n'ahịa ahịa football. O meela ego dị ukwuu n'aka nwa ya nwoke.
Nne: Dika Gulizar Özil bụ nne nke Mesut Ozil. Ọ malitere dị ka nwunye ụlọ bụ onye isi ọrụ ya bụ ịkwado ụmụ ya. A kọwawo ya dịka nne ya si mba ọzọ na-enwe obi ụtọ bụ ndị ya na ya na-anọkọ na njem ndị ha kwagara na Germany. Enwere nne na nna dị n'etiti Mesut na Gulizar.
SIBLINGS: Mesut Ozil nwere ụmụnne atọ; ya bụ, Mutlu Özil, Nese Özil na Dugyu Özil.
Nwanne ya nwoke okenye, Mutlu Ozil. Ọ bụbu ndị na-eto eto na-egwuri egwu na ịghara ịchụso ọrụ ọ bụla kama iji mee ka ndị nwere mmasị na-eche nche ya. Enye ama enyene ifet ndinam utom esie ke utom edi enye ikenịmke ke mbon emi ẹkedụn̄de ke Turkey ọwọrọ ke itieutom. Taa, a na-akwụ ya ụgwọ maka ọhụụ Mesut Ozil. Mesut mụtara ụda ncha n'aka ya. Ntughari, na-agafe, ma na-egwu egwu na-esite n'aka Mutlu.
Mesut Ozil nwere ụmụnne ndị okenye abụọ; Nese Ozil (n'aka nri) na Dugyu Ozil (N'aka ekpe). Ha abụọ dọtara uche dị ka ha si Meszil Özil. Nese (n'akụkụ aka nri) karịsịa ka a kọwara dị ka Meswe's clone. Gị onwe ya, nwanne ya nwanyị nke tọrọ ya na Dugyu dị obere. Nwanne nwanne ha na-ebili na-eme ka ha nwee nkwado ego maka ụmụnne ya ndị mara mma. Taa, nrọ ogologo ndụ ha ezutewo.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Mweghachi ndụ
Mbụ, Mesut Ozil mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na ndụ dị mgbagwoju anya. Ọ na-adọrọ mmasị ya karịsịa nye ndị inyom na-abụghị ndị Alakụka bụ ndị na-agaghị achọ ịgbanwere okpukpe ya, si otú ahụ na-eduga n'ịgbaji.
Malite, Mesut Ozil edeela Anna Maria, onye bụ onye Germany na-esite na mbụ, onye lụrụ di na nwunye Finnish, Pekka Lagerblom.
Mgbe ọ gbasịrị Ozil, ọ na-akpọrọ onye rapper na Germany aha ya bụ Bushido ugbu a.
Mesut na-edekwa Aida Yespica, bụ eze mara mma nke mara mma nke ghọrọ Miss Venezuela na 2002.
Ozil malitere ịlụ Mandy Capristo, onye na-agụ egwú site na ọrụ, site na 2013 mana njikọ ha bịara ná njedebe na 2014 mgbe a kọchara ya na ọ na-ahụ nwanyị ọzọ.
N'ikpeazụ, ọ laghachiri mmekọrịta ya na enyi nwanyị mbụ ya na onye ọhụụ mara abụ Mandy Capristo. Njikọ ahụ malitere na November, 2015. Mgbe ha kewapụrụ onwe ha, ha ghọtara na ha na-echere maka ibe ha ma weghachite ọnụ ọzọ.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Obi na Nna
A maara mustafa (nna Ozil) maka nsogbu ya. Ọ ghọrọ onye ọrụ nwa ya na July 2011. Mustafa n'egbughị oge ka ọrụ Ozil mesịrị kpebie ịhọpụta nwanne ya nwoke bụ Mutlu. Nke a hụrụ mmalite nke esemokwu n'etiti nna na nwa nwoke. Mustafa kwuru na enyi nwanyị Mesut Mandy Capristo bụ naanị maka mkpebi nwa nwa ya ịhapụ ya dị ka onye na-elekọta ya.
Nke a mere ka ọtụtụ ndị hụ dị ka ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ. Nna ya, Mustafa gara n'ihu ịchụ nwa ya nwoke mgbe ọ chụsịrị ya.
Dị ka otu akụkọ si kwuo; 'Mustafa Ozil abụghị onye dị mfe obibi. Ọ lekwasịrị Anya Mesut ma mara na ya nwere nnukwu talent. Ọ na-aga ọzụzụ ọ bụla, ọ bụla egwuregwu. Ọ ghọrọ ebe etiti ndụ ya mgbe ọ kwụsịrị ọrụ m ji akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ iji soro ọrụ nwa ya nwoke. '
Nna ya na-enwe nkụda mmụọ na a hapụrụ ya weere ụlọ ahịa Mesut Ozil n'ụlọikpe. Ọ rịọrọ ka ego 495,000 kwụọ ụgwọ ya. Mesut Ozil agwaghị nna ya okwu kemgbe omume ya. Nna na mmekorita nwa nwoke nke a na-ekwu na ọ ga-esi ike merie ya.
Mgbe onye ọka iwu Mesut Ozil nọ na-edebe ihe ndị ọ chọrọ, ọ rịọrọ ka ọ laghachiri £ 800,000 nna ya na-emeghị ihe ọ bụla. E mechara kpebie ikpe ahụ n'ụlọ ikpe. Nke a weere nne na nna Mesut Ozil ka ha kewaa na nne na-eso nduzi nwa ahụ.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: A oké Muslim Ma ...
Mesut Ozil bụ Muslim. N'ụzọ doro anya, ọ bụ onye Alakụba na-anụ ọkụ n'obi, bụ onye na-agụghachi Akwụkwọ Nsọ n'ihu ọhụụ ọ bụla ọ ga-egwu. Na-ekwu okwu na Berlin dabeere kwa ụbọchị "Der Tagesspiegel", Mesut kwuru, sị, "M na-agụ akụkọ site na Quran tupu m apụ (na pitch). Nke a na-enyere m aka idebe uche m. M na-ekpe ekpere na ndị òtù ọlụlụ m maara na ha apụghị ịgwa m okwu mgbe m na-ekpe ekpere. "
N'agbanyeghị ịbụ onye na-eme Muslim, Mesut Ozil na-esiri ya ike ngwa ngwa n'oge okpomọkụ. Nke a bụ n'ihi ọrụ ya dị ka ndị na-agba ama.
Ọ na-agụghachikwa amaokwu ndị ahụ site na egwú ahụ n'oge ukwe nke German. Nke a bụ n'ihi na ọ pụghị ịbụ abụ nke mba.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Egwuru egwu egwu dịka nwata
Mesut Ozil mụtara otú e si egwuri egwu cheesi ka ha na-etolite na mpaghara ndị njem nke Gelsenkirchen, Germany. Dị ka football, ọ gbakwara mbọ Chess dị ka nwatakịrị.
Ọ bụ onye so n'òtù egwuregwu nke ụlọ akwụkwọ ya na ụlọ ọrụ chess. Mesut nwekwara mmasị na mgbakọ na mwepụ n'ụlọ akwụkwọ. Ịhụnanya o nwere maka Chess na mgbakọ na mwepụ nwere ụzọ dị mma maka echiche ya na egwu ya na -emepụta ikike na mpaghara egwu.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: anwụghị anwụ
Ọtụtụ ndị Fans jụrụ ajụjụ ahụ; Bụ Mesut Özil IMMORTAL ?. Ọtụtụ ndị Fans enwetatụla meltdown banyere ụdị nwoke ahụ dị na Arsenal na mbubreyo F1, Enzo Ferrari.
Ọbụna ndị òtù ya chere Mesut Özil bụ nlọghachi nke Enzo Ferrari. Onye ọkwọ ụgbọ ala Ịtali na onye ọkwọ ụgbọ njem nwụrụ na 14 August, 1988 - inye oge zuru ezu maka usoro ịlọ ụwa tupu emee Özil na 15 October, 1988. Echewo ozizi a na ozizi Buddha na ozizi Taoist, nke na-ekwu na mkpụrụ obi mmadụ na-ahapụ nwata ahụ ma na-amụghachi mgbe ọ nwụsịrị. Nke a bụ ihe kpatara ọtụtụ ndị New Age ji kwenye na Enzo Ferrari, onye malitere Ferrari, reincarnated dị ka Mesut Ozil.
Ịlaghachi azụ na njem oge njem banyere celebs abụghị ihe ọhụrụ.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Ọ bụghị mmadụ
Enyemaka ya enweghị njedebe. Nke a mere ọtụtụ ndị ji kwenye na ọ bụghị mmadụ. Mesut Ozil hụrụ ihe ụmụ mmadụ siri ike ịhụ. Foto dị n'okpuru gosiri ya.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Charity
A makwaara Mesut maka obi ebere ya nke na enye onyinye buru ibu nye ọtụtụ ndị ọrụ ebere. O nyeere ya ego 2014 World Cup (ihe dịka USD 5, 00, 000) maka ọgwụgwọ gbasara ụmụaka 23 Brazil.
Ahụike ha na ọgwụgwọ ha gara nke ọma. O mere nke a ka ọ bụrụ akara nke ekele maka ọbịa ọbịa nke ndị Brazil. Nke a bụ akụkụ nke ọrụ BigShoe ya. Ihe oru ngo a kwusiri site n'inye akpukpu a dika onyinye nye otu onye Brazil a na-emeso ya nke na-eme ka o bu ndi na-abia.
Na May nke 2016, Mesut gara kwa n'ogige ndị gbara ọsọ ndụ na Zaatari na Jordan ma bịanye aka n'akwụkwọ maka ndị Fans ya bụ ndị mejupụtara banyere ndị 80,000 ndị gbara ọsọ ndụ Siria.
O lekọtara ụmụaka ndị a hapụrụ n'ihi agha obodo Siria. Özil gara ebe obibi ahụ nakwa na ị na-egwu egwu ụmụaka, na-edebanye aha na ntinye aka na uwe elu.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu:Banyere Anya Ya
Ọ bụrụ na ị na-ele anya na anya Mesut Özil anya, i nwere ike ile ihe anya image nke onye na-ata ahụhụ si Graves Ọrịa (aka thyroid anya ọrịa). Ma ọ naghị enwe nsogbu ọ bụla dị otú ahụ.
Isi ihe atọ na-eme ka anyị chee na Özil abụghị ọrịa ọrịa Graves bụ:
Nke mbụ, anya ya adịghị eweta ihe ọ bụla iriba-ama nke acha ọbara ọbara ma ọ bụ mgbaàmà ndị ọzọahụkarị ọnọdụ ahụ.
Nke abuo, Ọrịa graves bụ ọnọdụ ebe mmetụta anụ ahụ na-abịa ma na-aga, ma ọ bụ na-agbasi ike. Anya Özil anọgidewo na-agbanwe agbanwe.
N'ikpeazụ, ọnọdụ dịka ọrịa Graves nwere mmetụta dị ka ọhụụ na-adịghị mma, nhụjuanya na ihe mgbu, ma ọ bụ ịhụ anya. Nke a ga - eme ka ọ bụrụ ọkachamara na - egwu egwuregwu na - egwu na ọkwa kachasị elu nke na - agaghị ekwe omume.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu:Akwụkwọ ya
A raara ya akwụkwọ. Akpọrọ ya "Mesut Özil Superstar". Nke a mere otu onye na-agbasi mbọ ike nke na-ekwusi ike na aha ya anọgideghị na-amaghị.
Mesut hụrụ ya n'anya ma nyefee ya ka o dee ihe ọzọ banyere ya onye nwere nsogbu 'Egwuregwu Maka Ịdị Ukwuu'.
Mesut Ozil Childhood Story Plus Akwụsịghị akụkọ ndụ Eziokwu: Ndepụta na Nweta Nchịkọta
(1) Na Arsenal FC enye emeri FA CUP thrice (2013-14, 2014-15, 2016-17) na Shield Community Shield na 2014,2015 na 2017.
(2) Na Real Madrid, ọ meriri La Liga (2011-12), Copa del Rey (2010-11) na Supercopa de España na 2012.
(3) Na Werder Bremen, ọ meriri DFB-Pokal (2008-09).
(4) Na Germany, o meriri FIFA World Cup (2014) na UEFA European Under-21 Championship (2009).
OZI NDỊ AKA NA-EBE
2009-2010 Bundesliga Top Enyemaka
2010 FIFA World Cup Top Enyemaka
2011, 2012, 2013 na 2015 German Player of the Year Award
2010-2011 UEFA Champions League Top Enyemaka maka Jose Mourinho na Real Madrid
2011-2012 La Liga Top enyere maka Jose Mourinho na Real Madrid
2015-2016 Premier League Top Enyemaka maka Arsene Wenger na Asernal
2015-2016 Player nke Oge site na Arsenal
Ngwongwo 2012 UEFA Best Player na Europe (10th place)
Ị na-ada ụda dịka onye na-agba ọsọ. E wezụga nke ahụ, ọ na-akpakọrịta Amine Gulse ugbu a, n'eziokwu ọ bụ MY hubby.
gị onye na-egwu bọl
Honda Keisuke nke Japan yiri ka ọ na-eme nke ọma dị ka ọkachamara na-eme egwuregwu nke ụwa mgbe ọ na-arịa ọrịa Grave.
Bọchị agbanwee: Ọktọba 1, 2020